‘रोमियो’ को लिरिकल गीत, कसको पिडामा तडपिए हसन ? « Ramailo छ
‘रोमियो’ को लिरिकल गीत, कसको पिडामा तडपिए हसन ?
प्रकाशित मिति : Aug 22, 2017
कात्तिक १७ गतेबाट रिलिज हुने फिल्म ‘रोमियो’ को लिरिकल अडियोले सार्वजनिक गरेको छ । एचआरके प्रोडक्शनको र एसको प्रस्तुतीमा तयार भएको फिल्ममा ‘तिम्रो यादमा’ बोलको गीतको लिरिकल अडियो सार्वजनिक गरिएको हो । कुर्वान अली खान र अमृता लिम्बुको स्वर रहेको यो गीतमा कुर्वानकै शब्द तथा संगीत छ । लिरिकल अडियो हेर्नुस् :
यो फिल्ममा हसनराजा खान, नीशा अधिकारी, ओसिमा बानु, मेलिना मानन्धर लगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्मलाई नव–निर्देशक शंकर कार्कीले निर्देशन गरेका हुन् । मिलन सापकोटा कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन, रामेश्वर कार्कीको छायांकन, किरण माइकलको लेखन, अष्ट महर्जनको एक्सन छ ।